Waxay ka caawisaa xulashada astaamaha LibreOffice iyadoo la adeegsanayo sahan | Laga soo bilaabo Linux
Waxay ka caawisaa xulashada astaamaha LibreOffice iyadoo la adeegsanayo sahan
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Kuwa kale
Waxay u muuqdaan inay si dhab ah uga soo baxayaan shaqada naqshadeynta ee LibreOffice, waana taas sababta ay u sameeyeen sahan si ay uga caawiyaan inay fahmaan tayada astaamaha loo adeegsaday tan Xafiiska Suite. Waxaan qirayaa inay jiraan astaamo aanan garanayn meel ay u socdaan 😕
Haddii aad rabto inaad ka caawiso sahanka, waxaan ka tagayaa iskuxirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waxay ka caawisaa xulashada astaamaha LibreOffice iyadoo la adeegsanayo sahan
Way fiicantahay inay bilaabayaan inay beddelaan farshaxanka Xafiiska Libre, in kasta oo ay aad u wanaagsan yihiin oo shaqeynayaan, isdhexgalka ayaa ah mid aad u fool xun, maalin dhaweyd waxaan u maleynayay inaan arkay wax ka beddelka isku xirka xafiiska Libre ee boggan, runtiina waxay tahay waxay umuuqatay mid quruxsan.
Waxaan ugu jawaabayaa, waxay ahayd in la xaqiijiyo nooca astaanta, ma ahan in la beddelo farshaxanka ... fahamka aqriska, fadlan ha iga tagin !!
Waa hagaag, maahan in si sax ah naloo siiyo ikhtiyaarro, laakiin inaan ogaado haddii aan aqoonsannay astaamaha keligood iyo runtu waxay tahay waxaan ku lumay hal 3 ama 4 sidoo kale waxaan u dhigay isla astaanta waxyaabo kala duwan sida 2 ama 3 jeer sidaa darteed astaamuhu maahan dareen badan leh in la yiraahdo.
Soo jeedinta xulashada astaanta ma fiicna. Waxaan u maleynayay inay ahaan laheyd xirmooyin calaamado ah, waxaan dooran doonnaa hal / hal kan ugu cod badana wuu sii joogi doonaa, laakiin maya ... xulashada astaanta shaqadu waa wax aan caqli gal ahayn maadaama taas la jaangooyay, in yar marka la yiraahdo.
Astaanta aan isleeyahay waa inay badalaan waa floppy disk-ka ay u adeegsadaan inay keydiyaan, maxaa yeelay jiilasha cusubi gabi ahaanba kama warqabaan.
Mar aan fogeyn, nin ayaa i weydiiyay sida loo badbaadiyo shaqadiisa waxaanan ku idhi, dhagsii astaanta "disk", cabbaar ka dib ayuu haddana i weydiiyay oo aan ugu jawaabay, riix astaanta diskiga. Waxaan la yaabanahay maxay tahay astaanta diskiga diskiga?
Kaliya waxaan kafekeray astaantaas. Qalabka loo yaqaan 'floppy disk' hadda ma ahan wakiil. Waxa kale ee aan ku ogaaday sahanka ayaa ah inaysan jirin xulashooyin. Taasi waa, waa inay dhigaan dhowr astaamo, tusaale ahaan, PASTE ka dibna aad doorato midka aad ugu jeceshahay. Hase yeeshe, waxay umuuqataa ciyaar garaacid.
Dhamaadka imtixaanka astaamuhu waxay weydiinayaan da'daada, waxay tixgelinayaan dhinacaas.
Haa, laakiin maxay wanaagsan tahay. Tusaale ahaan, maxay yihiin xulashooyin aan ahayn floppy disk loo isticmaali karo "Keydso faylka"? Waxaa jiray hal summad oo kaliya oo jawaabta ahayd.
Imtixaanku wuxuu muujinayaa haddii aadan heli karin astaan, tusaale ahaan, "keydso", ku dhufo kan xiga oo ha dooran midna. Markaas, xogtu waxay muujin doontaa in, tusaale ahaan, kuwa da'doodu ka yar tahay 20 sano aysan u aqoonsanayn diskiga diskiga inuu yahay astaan ​​badbaadin ah, taasoo u horseedi doonta naqshadeynta astaamaha aan isleeyahay.
Xushmad uma lihi waxa na farxad geliyay
Hadda markaan ka fikirayo waxaan necbahay floppy disk-yada, marwalba way lumiyeen qaabka anigana waan lumiyay wax walboo.
BADBAADI ICONKAAS !!!!!!!
Sidee u wanaagsan tahay in LibreOffice ay tixgeliso ra'yiga dadka isticmaala, hubaal waxay noqon doontaa mid aad u wanaagsan ...
Ku nacsiinta sahanka feker ahaanteyda ... ¬_¬
Sahan dhif ah feker ahaanteyda. Wareegii saddexaad waan tanaasulay. Akhrinta boostada Waxaan u maleynayay in isticmaaleha uu ka dooran karo hal xirmo icon dhowr ka mid ah.
Isla waxbaa igu dhacay, waxaan u maleynayay inaan dooran karno xirmo kale oo muuqaal ah ama wax la mid ah. Aniguba waxay ila noqotay wax yaab leh, laakiin waan dhammaystiray si kasta.
Waxay horey u sameeyeen sahan si ay u xushaan shaashadda guriga ee 'LibreOffice 3.6' haddii aan si sax ah u xasuusto, ma noqoneyso wax weyn laakiin ma arko micne la'aan.
Laakiin haye ... eaa !! Ogsijiin ayaa si weyn ugu muuqan doonta KDE SC 😀
Waxaan nahay labo ¬ ¬ Waxaan leeyahay waa inay isticmaalaan Faenza iyo Faenza Darkest siday u kala horreeyaan, iyadoo kuxiran mawduuca. Ama ka sii fiican, qaado mawduuca gtk / qt.
Waa hagaag, aniga sidoo kale.Waxaan u arkay wax lagu qoslo, maxaa yeelay kaliya astaamaha LibreOffice ee KDE ayaa muuqday ……. Looma muujinayo astaamo ama fikrado cusub LibreOffice, waxaa jira farshaxanno fara badan oo u sameeyay astaamo LibreOfice ……
Waxaan durbaba laqabsaday isticmaalka erayada Calligra, oo aan u awood badnayn sida xafiiska libre laakiin wixii aan sameeyo, way kafiican yihiin. Uma adeegsado xafiiska 'libre office' sida loo yaqaan 'chakra' marwalba wuu fashilmaa ama waxbaa ka dhinaa.
Way fiicantahay inaad isticmaasho qol aad u xiisa badan sida Calligra, sidoo kale waan xiiseynayaa inaan tijaabiyo
Waxaan sidoo kale u maleynayay inay siin doonaan inay kala doortaan dhowr astaamood oo shaqo ah, laakiin aniga waxay ila tahay inay tahay ciyaarta mala-awaalka astaanta shaqada.
Marka laga hadlayo faallooyinka "duug ah" astaanta 'floppy disk' waxaa macquul ah inay sax yihiin oo ay tahay in lagu cusbooneysiiyo astaamaha "warbaahinta" laga saari karo oo leh astaanta USB-ga.
Waxaa laga yaabaa in habkaas ay si fiican u muuqato
Runtii waan jeclaa kaqeybgalka, ma ahan codbixin lagu doorto astaanta astaan ​​u ah "qurux", waa tijaabo isticmaal oo run ah oo u adeegi doonta aasaaska naqshada UI. Waxaan rajeyneynaa in mashaariic badan oo bilaash ah oo software ah ay ku jiri doonaan dadka isticmaala tijaabada noocan ah, waa in wax yar laga qeyb geliyo horumarka, laakiin kaliya sida doofaarka guinea 🙂
Aniga ahaan waxay iila muuqatay sida tijaabada cilmu-nafsiga si loo arko haddii aad sifiican ulaxiriirto sawirada xarfaha, maadaama xulashada naqshadaha aad ubaahantahay ikhtiyaarro dheeri ah sawirada ficil ahaan, marka lagu daro kii ugu dambeeyay ee aan ubaahanahay inaan dhigo Linux (Xfce) = P
Waxaan rajeynayaa in sahankan uu u shaqeynayo nimankan howsha culus ka wada suite-ka, waxaan hada ku rakibay noocii ugu dambeeyay daaqadaha (xafiiska, ha u maleynin wax xun) waxna kama weydiiso MS Office 2010.
Astaamaha waa la beddeli karaa…. oo adigu waad faahfaahin kartaa mawduuc naftaada ah. Hadda waxaan haystaa astaamo aasaasi ah. Dhibaatadu maahan astaamaha inkasta oo horey loo dhigay…. Waad raadin kartaa kuwa dhexdhexaad ah, kuwaas oo ka madax bannaan distro-ga ay ku rakiban tahay (nooc gnome 3 astaamo ah) ama sameyso gnome / tango / noocyada aasaasiga ah + Noocyada KDE, maadaama ay yihiin deegaanno badan oo metelaya. Laakiin waxa ay tahay inaad isku daydo inaad bedesho ayaa ah deegaanka baararka iyo qaabeynta astaamaha wax ka casrisan (astaamo waaweyn, hagaajinta hoos u dhaca, iwm). Waqti ka waqti. Ilaa hadda waxay umuuqataa inay isku dayeen inay hagaajiyaan waxqabadka waxaanan dhihi karaa waa la ogaan karaa sida ugu dhakhsaha badan ee uu ku furmayo marka loo eego laba ama seddex nooc oo gadaashiisa ah.
Xusuusin maamulayaasha: "Faallooyinka wax ka beddel" fikrad fiican ma noqonayso. Mararka qaar khaladaadka waan tabayaa ka dibna waxba kama qaban karo si aan u saxo.
Waxaa jira wax muuqda, celceliska da'da kooxda naqshadeeyayaasha waxay ka badan yihiin 40 sano ... Sikastaba xaalku ha ahaadee, talo soo jeedintaydu waxay noqonaysaa intaan wax badan laga walwalin naqshada astaamaha, waxay daryeelaan nadiifinta hawlgalka xirmada, marka, tusaale ahaan , ka goynta bogga oo ku dhajinaya dukumiinti ma noqoneyso jirdil Shiine ah.
HAMBALYO LibreOffice tixgalinta BULSHADA.
Waxaan jeclaan lahaa inay sameeyaan oo ay raacaan hoggaanka LibreOffice
marka hadday noqon lahayd BULSHO
Waxaan gaadhay DHAMMAAD !!!!
Waana ii mahad celiyeen !!!
Waxay dareemeysaa wax weyn in lala shaqeeyo OpenSurce!
(Haddii aan isticmaali lahaa MinosoftOfise xitaa iskuma dayi doono inaan ka fekero caawimaad)
Had iyo jeer waxaan isticmaalaa astaamaha "Tango" haddii ay i siiyaan astaamaha badanaa lagu rakibo LibreOffice (KDE), sida caadiga ah in qaarkood aysan xitaa garanaynin meesha laga helo.
Waxay ii sheegeen inay ku sii socon doonaan isdhexgalka garaafka ee soo jireenka ah… .. Waxaan rajaynayaa inay turxaan bixin karaan muuqaalka garaafka gaar ahaan GNU / LINUX… maktabadaha Borland c ++ VCL oo leh aalado ay wataan ma aha kuwo aad u qurux badan runta… waana la naqshadeeyay WINDOWS yo ..waxaa lagaa rabaa inaad aqriso lambarka LOTUS si aad uhesho iswaafajinta wijetrada qaarkood. Marka waxay si fiican ugu muuqdaan GNU / LINUX.
Ubuntu: Fikradayda ku saabsan qaybinta this